ပေါက္ခရဝသ ကွက်ကြားမိုးတွေ မရွာကြပါနဲ့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပေါက္ခရဝသ ကွက်ကြားမိုးတွေ မရွာကြပါနဲ့…
ပေါက္ခရဝသ ကွက်ကြားမိုးတွေ မရွာကြပါနဲ့…
ဘင်္ဂလီကိစ္စမှာ အစိုးရတိုင်း တာဝန်မကင်းပါ…
ဟိုးအရင် သမိုင်းကို ပြန်လေ့လာ…
– ရခိုင်ဘုရင်တွေခေတ်ထဲက နိုင်ငံခြားသား ကြေးစားစစ်သား အကြံပေးတွေ ခေါ်သွင်းတယ်…
– အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ ရခိုင်တွေချမ်းသာတယ် ၊ ပညာတတ်ပေါတယ် … ။ အိမ်အလုပ်ကူဖို့ လယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ လုပ်သားရှားတော့ ဘင်္ဂလီတွေကို ခေါ်ခိုင်းတယ် …
– အင်္ဂလိပ်ကလည်း သူပိုင် ကိုလိုနီတွေက အလုပ်လက်မဲ့ ဘင်္ဂလီလယ်လုပ်သားတွေကို သွင်းချလာတယ်…
– ရခိုင်တွေကလည်း ဘင်္ဂလီတွေကို လူရာမသွင်း ၊ ငယ်နိုင်လို့ သဘောထားပြီ အတော်အနိုင်ကျင့်တယ် …
– ဒုတိယကမ႓ာစစ် ဂျပန်တွေကို မေယုဒေသမှာ ပြန်ခံချဖို့ ဘင်္ဂလီတွေကိုသုံးတယ် …
– ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးက စစ်အပြီးမှာ ဘင်္ဂလီတွေကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုတယ် …
*** အဲဒါတောင် ဘင်္ဂလီတွေက ရခိုင်တွေကို ရွာလုံးကျွတ် သတ်တယ် … ***
– ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီခေတ် ဘုရားဒကာကြီး ဦးနုက မဲရဖို့ ဘင်္ဂလီတွေကိုပွဲထုတ်တယ် …
– မဆလ ဦးနေဝင်းခေတ် ၊ သူရဦးတင်ဦး ခေါင်းဆောင်ပြီး ဘင်္ဂလီတွေကိုဗျင်းတယ် … ။ ဘင်္ဂလီတွေ ဘင်္ဂလားကို ပြေးရတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတကာဖိအားကြောင့် ပြန်လက်ခံရတယ်… ။ ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေရဲ့ ၂-ဆလောက် ပြန်ဝင်လာတယ် …
– ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ မြို့ပေါ်မှာ ဆင်နွဲနေကြချိန် ၊ ဘူးသီးတောင် မောင်တောမှာ ရခိုင်တွေကို အမျိုးဖြုတ်ဖို့ ဘင်္ဂလီတွေ လုပ်ကြတာ ၊ ကံကောင်းလို့ လက်မတင်လေး…
– ၈၈၈၈ နောက်ပိုင်း စစ်တပ်ခေတ်မှာ နစက စစ်ဆင်ရေးနဲ့ ဗျင်းပြန်တယ် … ။ တရားဝင်ပြန်လက်ခံတာက သဘောလောက် ၊ တရားမဝင် ပိုက်ပိုက်ယူပြီး မြို့ပေါ်တင်လိုက်တာ မနည်း …
– ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘင်္ဂလီကိစ္စ Legitimacy လိုချင် ၊ ဖိအားလျော့ချင်တော့ ဘင်္ဂလီတွေကို ဝှိုက်ကဒ်ထုတ်ပေးတယ် … ။ တဘက်မှာလည်း (လဝက အဆိုအရ) ရွာထဲတောင် အဝင်မခံတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေကို ဝှိုက်ကဒ်နဲ့မျှားပြီး လူရေတွက်ရတယ်လို့ဆိုတယ် …။ ဝှိုက်ကဒ်က နိုင်ငံသားကဒ်မဟုတ် ၊ ဥပဒေမရှိ အချိန်မရွေး ပယ်ဖျက်လို့ရတယ် … နားလှည့် ပါးရိုက်တာလို့ ပြောတာပဲ …
– ပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့ ကြံ့ဖွတ်ခေတ်မှာ (၂၀၀၈ နာဂစ် ခြေ/ဥတောင် ဘယ်သူ့ တောက်ဂရုစိုက်ခဲ့လို့လဲ) နိုင်ငံတကာ အမြင်ကောင်းအောင် ဘင်္ဂလီအမတ် ၃-ယောက်ကို လွှတ်တော်ထဲသွင်းတယ်… ။ ကျန် ၂-ယောက်က မြို့ပေါ်မှာ စီးပွါးရေးတွေရှိလို့ အသံသိပ်မထွက်ပေမည့် … ဘင်္ဂလီ “ဦးရွှေမောင်” ကတော့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးတွေ နတ်သံနှောပြီး တွင်တွင်အာတော့ “ကိုယ်မွေးတဲ့မျောက် ကိုယ့်ပြန်ခြောက်” ဖွတ်အစိုးရ မြွေခြောက်ကိုက်…
– ဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်တယ် … အထူးမပြောလို (ပြောရင် အဆဲခံရမှာပေါ့ :k:) မြင်နေကြားနေရတာပဲ …
– ဦးဖီအနန်နဲ့ အကွက်ရွှေ့ဖို့လုပ်တယ် ၊ ဒီနေ့အစီရင်ခံစာထွက် နောက်နေ့သတ် …
ဒီနေရာမှာ ရခိုင်အမတ် ဒေါက်တာအေးမောင်အကြောင်း ပြောဖို့ဖြစ်လာတာက …
– သူ့ကို လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းလို့ ပုဂ္ဂလိက အမြင်အရတော့ မကြိုက်ပါ ။ ဒါပေမဲ့ သူ့လူမျိုးတွေအသတ်ခံရတော့ “အကြမ်းဖက်အဆင့် သတ်မှတ်ပေးဖို့ လွှတ်တော်တင်တယ်” ၊ အတင်မခံဘူး ။ နိုင်ငံတော်အကြံပေးရုံးကို စာတင်တယ် … ဖြတ်ပိုင်းပြန်မလာ … ။ သူနဲ့ အတော် ပနံသင့်ဖူးတဲ့ ဓာတ်ခဲ “AA” တွေကလည်း ၊ အချင်းချင်း ဟင်္သာ ကိုးသောင်းဇာတ်ခင်းပြီး အသံတိတ် …
– အဲသည့်အခြေအနေမှာ သူ တချိန်က “ဘီလူး သရဲ” နဲ့ နှိုင်းပြီး ကလော်ဖူးတဲ့ စစ်တပ်ကို သူ့လူမျိုးအတွက် ဒူးထောက်သွားတယ် … ။ သူ ဘယ်မျက်နှာကိုပဲကြည့်တယ်ဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှားပြသွားတယ် … ဗယာကြော်ပါ …
– လွှတ်တော်က အခုမှ “အကြမ်းဖက်အဆင့် သတ်မှတ်တယ်” ၊ နောက်ကျတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ် … ။ “မြို” တိုင်းရင်းသားတွေ အသတ်ခံရထဲက အနည်းဆုံး “ညာသံ” လေးတော့ ပေးထားရမှာ …
အခု ဘင်္ဂလီကိစ္စ ပြသနာတွေတက်လာတော့…
– ရခိုင်တွေက ကိုယ့်လူ မစွံမှန်းသိသော်လည်း “AA” ကို အထိမခံ …
– ဖွတ်တွေက ကိုယ့်လူ မလုပ်သင့်တာ လုပ်ခဲ့မှန်းသိသော်လည်း “အဘ”တွေ ကို အထိမခံ …
– ငှက်တွေက ကိုယ့်လူ ပုံမကျမှန်းသိသော်လည်း “အစိုးရ” ကို အထိမခံ …
“ဖာ ကြ” မရရင် “ချုပ် ကြ” … ဖြည်းဖြည်းဆဲကြလေသတည်း …
(အဘိဇ္ဇာတွေ … အဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ မောနေမှာစိုးလို့)
ဘယ်သူမှ မမှားဘူး ၊ မြန်တျန့်က ဘင်္ဂလားနဲ့ နိုင်ငံနီးချင်းဖြစ်နေတာရယ် … ကိုယ်တွေက မြန်တျန့်ဖြစ်နေတာရယ်ပဲ မှားးးးးးးးးး … တာပါ…
အမျိုးတွေ… ဘေးလွတ်ရာကို ပြေးထား …
ဖဘက ဘုန်းဘုန်း Pandita ရဲ့..” A ဇာတ်လမ်း” ပို့စ်နဲ့တွဲဖတ်..။
AA, ANP, ARSA, ALP ဆိုတဲ့ A နဲ့စတဲ့ အဖွဲ့များရဲ့ ဇာတ်လမ်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
AA ဆိုတဲ့ အသစ်ပေါ်လာတဲ့ ရခိုင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့နဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ရဲ့ ANP ပါတီတို့ဟာ ရခိုင်လူထု ထောက်ခံမှု အများဆုံး ရထားသူတေလို့ ဆိုပါတယ်။ AA က စစ်ရေး၊ ANP က နိုင်ငံရေး။ ARSA ကတော့ သိန်းသန်းချီတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေအပေါ် သေဆိုသေ၊ ရှင်ဆိုရှင် ဩဇာသက်ရောက်နိုင်တဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့။ ALP ကတော့ NCA ထိုးထားတဲ့ မူလလက်ဟောင်း ရခိုင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့။
အဲဒီမှာ ARSA အကြမ်းဖက် အဖွဲ့က မေယုတောင်တန်းမှာ ခိုတယ်။ AA ဆိုတဲ့ ရခိုင်တပ်မတော်ကလဲ အဲဒီမှာပဲ ကပ်နေရပုံ ပေါ်တယ်၊ ဘင်္ဂါလီ ပြသနာကြောင့် စစ်တပ် အဝင်ခက်တဲ့ ဒေသကိုး။ အဲဒီ နှစ်ဖွဲ့ဟာ တကယ်တော့ တည့်စရာ အကြောင်း မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘုံရန်သူ အစိုးရတပ် ရှိနေတော့ မတည့် အတူနေ သဘော ကျောချင်းကပ်နေရပုံ ပေါ်တယ်။
နောက်တော့ မြိုတိုင်းရင်းသားတွေ အသတ်ခံရတဲ့ ကိစ္စမှာ ANP က ဒေါက်တာအေးမောင်တို့က ကာချုပ်ကို သွားအကူအညီ တောင်းတယ်။ သူမသွားလဲ အစိုးရ သဘောတူညီချက်နဲ့ စစ်တပ်က ဝင်တော့မှာ ဆိုတာ ဒေါက်တာအေးမောင် သိလောက်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘာလို့ သွားသလဲ။ AA ဆီက အကူအညီ မရလို့ပေါ့။ “မင်းတို့က ပြည်သူကို မငဲ့ရင် ငါတို့ကလဲ မင်းတို့ကို မငဲ့ဘူး” ဆိုတဲ့ သဘော။ ဒီတကွက်နဲ့ ဒေါက်တာအေးမောင်တို့က ရခိုင်မှာ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထွက်ပြီး AA က အရှုံးပေါ်သွားတယ်။
နောက် စစ်တပ်က မေယုတောင်တန်း ဝင်လာတော့ ရခိုင်သော၊ ဘင်္ဂါလီသော ခွဲနေမှာ မဟုတ်ဘူးလေ၊ စခန်းတွေ့ရင် အကုန်တိုက်တော့မှာပဲ။ ဒီတော့ အကျိုးဆက် (၂)မျိုး ဖြစ်လာတယ်။
(၁) မေယုတောင်တန်းပေါ် နေလို့ ထိုင်လို့ မကောင်းတော့တဲ့ AA က သူတို့ ရခိုင်ချင်း ဖြစ်တဲ့၊ NCA လဲ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ALP နယ်မြေထဲ ဝင်ခိုချင်တယ်။ ကြက်သွန်နဲ့ ပေါင်းမှ အထောင်းခံရတဲ့ ငရုတ်သီးလို ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တဲ့ ALP ကလဲ လက်မခံချင်ဘူး။ အဲဒီမှာ AA နဲ့ ALPနယ်မြေလု တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာတော့တာပဲ။
(၂) အခု ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဖြစ်လာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းဟာ ကိုဖီအာနန်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ တခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ဘူး၊ အစိုးရတပ်ရဲ့ မေယုတောင်တန်း စစ်ဆင်ရေးကြောင့်လဲ ပါနိုင်တယ်။ ခြေကုတ်ပျောက်သွားတဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က ရပ်သူရွာသားတွေကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ရမ်းတဲ့ သဘော။
ဝေဖန်ဖို့နဲ့ ဆင်ခြင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ဦးဖီအာနန် အစီရင်ခံစာက ဘယ်သူတွေ ဘယ်အချိန်စဖတ်ရလဲ သိချင်သား ။
ဒိနေ့ထွက် နောက်နေ့ မနက်ထချ ဖို့ဆိုတာ မလွယ် ဆိုတော့ အဲ့ အစီရင်ခံစာ ကြောင့်သာဆို အစိုးရထဲ အာဏာပိုင်တွေထဲ အစီရင်ခံစာ ရေးတဲ့ အဖွဲ့ထဲ သူတို့ လူ ရောက်နေပြီလား …
၂၄နာရီလောက်အတွင်း အကုန်ဖြစ်သွားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်..။
မသကာ.. ဒေါ်စု ယူအန်လာမယ့်အချိန်ကို ချိန်ဆရင်း ..တိုက်ဆိုင်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့..။
“AA” တော့ ကံဇာတာဂြိုလ်စီးပြီ ထင်တာပဲ …
ချင်းလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့လည်း မတည့် ၊ ရခိုင်ချင်း “ALP” ကိုဝင်ဆော် …
အခု ဘင်္ဂလီအရေးမှာ လူမျိုးရေးသန္ဓေမမှန်တာတွေ ထုတ်ပြောတော့ ဂွမ်းရော …
ဦးဖီအနန်ရဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုအစီရင်ခံစာက ကြိုပေါက်ပုံရတယ် …
ဘားမားကမ်ပိန်း နဲ့ ဝါကာအူဒင်တို့က လက်တံရှည်တယ်လေ …
ဘီဘီစီဆို သူတို့ချုပ်ထားတာ … သူတို့ဘက်ပဲ ဇောင်းပေးတယ် …
သတင်းတွေအရတော့ စစ်တပ်က မေယုတောင်ကြောထဲက အခြေစိုက်စခန်းတွေ ဝင်ရှင်းချိန် ၊ ရွာတွေမှာရှိတဲ့ အကြမ်းဖက်သင်တန်းဆင်း ဘင်္ဂလီအမာခံတွေက မြို့တွေ ရွာတွေကို ဝိုင်းတဲ့ “ယုန် တောင်ပြေး ၊ ခွေး မြောက်လိုက်” ဗျူဟာပေါ့ဗျာ ။
ဘင်္ဂလီတွေက ရွာထဲမှာနေရင် အရပ်သား ရွာသား ၊ ရွာပြင်ရောက်ရင် အကြမ်းဖက်တွေဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ စစ်တပ်ကလည်း ကင်းစခန်းတွေ လာဝိုင်းမှ ပစ်လို့ရတဲ့ အနေအထား ။ စခန်းမထိုင်ပဲ ပျောက်ကျား ကိုယ်ဖျောက်နေတော့ သွားဆော်ပြန်ရင်လည်း အရပ်သားတွေကို သတ်တယ် ၊ Genocide ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာမှာ အမှုကြီးဦးမယ် … ဘေးကြပ်နံကြပ်ပဲ
ခေတ်ကို က မကောင်းတာပါ …. ငယ်ငယ်ကထဲ က နှစ်စဉ် ကြားနေကျစကား…
မြို့ထဲတွေလည်း ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲ မသိ ။။
ဆြာကထူးဆန်းရေ… မြို့ထဲတွေ ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲတော့ သေခြာမသိ …
ငယ်ငယ်တုန်းကထက်စာရင် ဗလီတွေ မှိုလိုပေါက်လာတာတော့ မျက်မြင်…
ချာ့ချ်တွေနဲ့ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေက အရင်အတိုင်း …
ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အစွဲမရှိပါဘူး …
ဘာသာရေး ဋ္ဌာနတွေက အစွန်းရောက် အမုန်းတရားတွေ မဖြန့်ဖြူးစေချင်တာ…
သောက်အစိုးရ သောက်အစိုးရ သောက်အစိုးရ
မှတ်ပလား ၁၉၈ရကနေ ၂၀၁ဝ အထိ အိစုးရ
အစိမ်းဝတ်တွေကိုလည်း လျှော့တွက်လို့ မရဘူး
ဒီBGLတွေ ဝုန်းတော့မယ် ဆိုတာသတင်း ရထားတာ
ကြာပြီပဲ တမင်အဝုန်းခံပြီ အခုလိုအချိန်မှာ မီဒီယာအားနဲ့
ကမ္ဘာကိုချပြ နိုင်ရင်တော့ အကေင်းဆုံးပေါ့ ကမ္ဘာသိမီဒီယာ
၂ခု၃ခု လောက်ကို မြန်မာအစိုးရ ချုပ်ထားနိုင်ရင် တော့အကောင်း
ဆုံး ခက်တာက ပိုက်ဆံမရှိ
အပေါ်မှာ မန့်ခဲ့သလိုပဲ … သတင်းကြိုရလည်း သွားဝုန်းဖို့ကမလွယ်ဘူး…
ဘင်္ဂလီတွေက ရွာထဲဝင်သွားရင် ကိုယ်ယောင်ဖျောက် သာမန်ရွာသားဖြစ်ကုန်ရော …
သတင်းကြိုရထားရဲ့နဲ့ အဝုန်းခံ ကျဆုံး လက်နက်တွေပါကုန်တာတော့ …
ညံ့ကြေးပေးရတယ်ပဲ ဆိုဆို ၊ မချင့်မရဲ ဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာ …
ဒီတခါတော့ အချိန်နဲ့တပြေးညီ နိုင်ငံတကာကို သတင်းထုတ်ပြန်ပြီး …
မီဒီယာကို အမှန်သတင်းနဲ့ လက်ဦးမှုရယူသင့်တယ် …
လောလောဆယ်.. ဒီဒီအိုအက်စ် နဲ့ ရွာဝက်ဘ်ဆိုက်တိုက်ခိုက်ခံနေရသဗျ..။
သာဓု.. အမျှ.. ယူကြ.. ဆို့ကြ..။
နဂိုထဲက ဆာဗာက ၃၉ ဗိုက်ပူနဲ့အပြိုင် ဖွတ်ချက် ဖွတ်ချက်ဖြစ်နေဒါကို
ဘင်္ဂလီအရေးဖြစ်တိုင်း သဂျီးဆိုက် ကင်းကိုက်တယ်ဆိုတော့ …
တခုခုတော့ တခုခုပဲ … ကြောင်ဏှာဂျီးပြောတာ ဟုတ်နေလားမသိ …
သဂျီးကိုက အဲ့ဒီ ဘင်္ဂလားနဲ့အကျိုးပေးပုံရတယ်
ဒါမှ သဂျီးရွာ လူစည်မှာ
ခန့်မှန်းရတာတော့ သဂျီးနာမည် မာမွတ်ကိုင် ဆိုတာ…
ဟက်ကာတွေ သိထားပြီနဲ့တူတယ် … ခွိ
သမိုင်းကို ပြန်လေ့လာတဲ့အခါ ဟိုးအရင်က မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလားတွေ အရင်ဝင်ခဲ့တာတဲ့….
မြန်မာ့သမိုင်းကတော့ တုတ်ထမ်း ဓားထမ်း ဒုံးကျည်ထမ်း ပြောရမှာ …
သေချာတာတော့ မြန်မာဝတ်စုံမှာ ပုဆိုး – ကုသလ ၊ တိုက်ပုံး – စိန …
အစားအစာ မုန့်ဟင်းခါး – မွန်ခမာ တွေဆီက အမွေယူထားတာပဲ …
ဂီတမှာတောင် ယိုးဒယား ပတ်ပျိုး ဆိုတာ ရှိသေးတယ် …
အထဲက.. စတိတ်ကော်လာရျပ်(Grandad collar shirts)က.. အမေရိကန်/အင်္ဂလိပ်ဗျ..။
တကယ့်မြန်မာပွဲတက်ယူနီဖောင်းဆို.. ပုဆိုးခါးပတ်ပတ်ပြီး.. ဖနောင့်ပိတ်ရှုးစ်ဖိနပ်ပါစီးရတယ်..။
အိုဘယ့်.. ငတို့ မြန်မာ..။
“လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ၊ ပုဂံ ဘုရားပေါင်း” လို့ ဆိုရိုးရှိပေမဲ့ …
အဲသည့်ထဲက ၃-ပုံ ၂-ပုံ လောက်က ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေပါကွီ …
ဟုတ်တယ် အစိုးရတိုင်းတာဝန်မကင်းပါ.. ခုအစိုးရနဲ့ဆိုပိုတောင်ဆိုင်သေးပါတယ်။
ဘယ်အစိုးရကိုမှ ကွက်ပြောလို့ မရပါဘူး…
ဘင်္ဂလီတွေကို အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်မှာ စသွင်းလာထဲက …
ဘယ်အစိုးရလက်ထက်မှာ အဲသည့်အရပ် အေးချမ်းဖူးပါသလဲလို့ …
ဘာအဓိပ်ပယ်နဲ့ ပြောတာလည်း အခုအစိုးရက
BGLတွေကို ထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့လို့လား
ဒါမ မဟုတ် လက်ရှိအစိုးရ ဖြစ်နေလို့လား
ရွဲ့ပြောတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျား …
“ချ..ချ.. အဲဒီကောင်ကိုသတ်.. အဲဒီကောင်ကိုသတ်..။”
ချတာတော့ ချမှာပဲ ။ ဒီတစ်ခါတော့ အတော် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်နေပုံရတယ် …
လက်ကုန်တွေဗျင်းလိုက်ရင်လည်း Genocide နဲ့ R2P လာတော့မှာ … ဒွတ်ခ
ထင်တိုင်းကြဲခွင့်ရှိတဲ့ စစ်အစုိုးရ အာဏာရှင် အဆက်ဆက်တောင် မဖြေရှင်းနိုင်တာ နာဂစ်ခြေဥနဲ့ ချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ ဒီချုပ်အစိုးရ ဘယ်လိုလုပ် ထိန်းနိုင်မလဲ။ ဘင်္ဂါလီကတမျိုး၊ ရခိုင်ကတမျိုး၊ တပ်နဲ့ရဲကိုမပိုင်၊ ဖွတ်နဲ့မျိုးချစ်ကလဲ ချောင်းနေတယ်။ လတ်တလော မဘသကို ချိုးထားနိုင်တာ ကံကောင်း၏။
အာဏာရှင် ဘိုနေဝင်းတောင် ရှင်းလို့မရနိုင်ခဲ့တာ ၊ ဘယ်အစိုးရမှ ရှင်းနိုင်မည့်ပုံ မပေါ်…
ဒီအရေးမှာ မဘသနဲ့ ဦးဝီရသူ ဝင်မပါဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ် … သူတို့ဝင်ပါရင် ပွဲပျက်မှာ…
လက်ရှိအစိုးရကိုတော့ အထိမခံတာမျိုးမရှိပေမယ့် အပြည့်အဝနီးပါယုံကြည်ပါတယ်။အမေစုကိုတော့ အပြည့်အဝသံသယမရှိယုံကြည့်အားကိုပါတယ်။
အူးလေးကတော့ ဘဝပေးအသိ ၊ စာဖတ်လို့ရတဲ့ အသိတွေအရ …
“ဘယ် နိုင်ငံရေးသမားကိုမှ မယုံပါဘူး” ကွီ …
လွတ်လပ် ငြိမ်းချမ်းစွာ သဘောထားကွဲကြပါ …
ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဦးလေးရဲ့။လုံးဝစုံလုံးကမ်းယုံ ပုံအပ်ယုံတာမျိုး၊တခြား တခြားတွေထက်စာရင် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တာမျိုး။
အပြည့်အဝနီးပါးဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘာလုပ်လုပ်စုံလုံးကန်းထောက်ခံတာမျိုးမဟုတ်ပါ။တခြား တခြားပါတီတွေထက်စာရင် ယုံကြည်လို့ရသင့်သလောက်ရတယ် လို့ ဆိုခြိင်းပါ။
ပြောရရင်အဆဲခံရမယ် ဘင်္ဂါလီတွေက ခိုးဝင်တာမဟုတ်ပါ။ ပိုက်ဆံပေးပြီးကိုဝင်လာထားကြတာကိုး။ဘောင်းဘီဝတ်တို့ ပြည်သူကို နားလှည့်ပါးရိုက် ဒရမ်မာခင်း မင်းသားဝင်ကယ်လုပ်နေကြတာ မြန်မာပေါကားလို သိနေရတာခက်တယ်။
ဘင်္ဂလီတွေကို ခိုးသွင်းလို့ အလုပ်ပြုတ်လာတဲ့ …
ရခိုင်လူမျိုး ရဲအုပ်ဟောင်းနဲ့ အလုပ်အတူ တွဲလုပ်ဖူးတယ် …
သူပြောပြတဲ့ ဘင်္ဂလားနယ်စပ်ကအကြောင်း နောင်မှရေးဦးမယ် …
အဲသည့်အရပ်ကိုရောက်တဲ့ အာဏာရှိဝန်ထမ်းတိုင်း ဘင်္ဂလီနဲ့ မကင်း …
ကိုယ်က မစပ်စု မမေးမြင်းပါပဲ ကြွားချင်လွန်းလို့သိရတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့အူးလေးရေ။
သိခဲ့စဉ်က သိပ်ငယ်သေးတော့ လူမျိုးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမှာ ဒီလောက်ထိခလောက်ဆန်ကုန်နိုင်မှန်း နားမလည်သေးပါ။
သူအာချောင်လို့တော့ မဟုတ် …
သူ့အကိုက အူးလေးဆိုက်မှာအပ် ၊ သူကိုယ်တိုင်က ဘင်္ဂလီလို အရေး အဖတ် အပြော မွတ်နေအောင် ကျွမ်းကျင်ပြီး ၊ ဘကုန်းအလုပ်သမားတွေကို ဝပ်နေအောင် အုပ်ချုပ်နိုင်လို့ အထင်တကြီးနဲ့ ဗျစ်ရည်တိုက်ပြီး စပ်စုထားတာ ။ Easy Money $$$$ နောက်ကိုလိုက်ရင်း လူမျိုးရေးသစ္စာဖောက်တွေဖြစ်ကုန်ကြတဲ့ သူတို့အကြောင်းပေါ့ကွီ …